The 1st Yangon International Motor Show 2019 - Yangon Convention Centre
Home » Events » The 1st Yangon International Motor Show 2019
Event Date: 23-27 Jan 2019 (10AM-8PM)
လာမယ့် ဇန်နဝါရီလ ၂၃-၂၇ ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန် ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ (YCC) မှာ ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် ပထမအကြိမ် ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မော်တော်ယာဉ် (Yangon International Motor Show) ပြပွဲကြီးကို ဦးစီးစီစဉ်ထားတာကတော့ GPI Myanmar Co., Ltd. ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
GPI Myanmar Co., Ltd ဟာဆိုရင် အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ အကြီးဆုံးသော မော်တော်ယာဉ် ပြပွဲကြီးဖြစ်တဲ့ Bangkok International Motor Show (BIMS) အပါအဝင် မော်တော်ယာဉ်ပြပွဲပေါင်း များစွာကို စီစဉ်ကျင်းပနေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် Grand Prix International PLC ရဲ့ ကုမ္ပဏီခွဲ တစ်ခုပင်ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော နိုင်ငံတကာအဆင့် Indoor မော်တော်ယာဉ် ပြပွဲကြီးအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်မည့် ပထမအကြိမ် ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မော်တော်ယာဉ် ပြပွဲကြီး (YIMS 2019) ကို ရန်ကုန် ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ (YCC) ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရန် သတင်းပတ် (၄) ပတ်သာ လိုပါတော့သည်။
The upcoming Yangon International Motor Show (YIMS) 2019 to be held at Yangon Convention Center (YCC) is brought to you by GPI Myanmar Co., Ltd.
GPI Myanmar Co., Ltd., isasubsidiary of Bangkok based Grand Prix International PLC, the organizers of renowned Bangkok International Motor Show (BIMS) as well as many other international auto shows across ASEAN region.
Bangkok International Motor Show (BIMS) is one of the most popular annual auto shows in the world featuring world’s top automotive brands. This year BIMS celebrated its 40th Anniversary.